Qatar oo markii labaad lagu qabanayo ciyaarta kama dambeysta Super Cup-ka Talyaaniga – Gool FM
(Doha), 09 Sept 2016 –Xiriirka Kubadda Cagta Waddanka Qatar ayaa shaaca ka qaaday in uu is afgarad dhex maray dhiggiisa Talyaaniga kaas oo ku saabsan in ciyaarta kama dambeysta ah ee Koobka Super Cup-ka Talyaaniga lagu qabto Caasimadda waddanka Qatar ee Doha.
Waa markii labaad ee Qatar ay marti geliso Ciyaarta geba gebada Koobka Super Cup-ka Talyaaniga iyadoo horey u marti gelisay sanadkii 2014, halkaas oo ay ciyaartii Final-ka ahayd isku arkeen Juventus iyo Napoli, waxaana gool ku laad ku badiyay Juventus.
Sanadkan waxaa Doha ciyaarta aakhirka ah ee Italian Super Cup isku haleeli doona kooxaha Juventus iyo AC Milan oo wada dheeli doona 23 Bisha December.
Dhinaca kale Guddoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Qatar Shiikh Xamad Bin Khaliifa ayaa sheegay in xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya Talyaaniga uu suurto gelinayo in ciyaaraha cul culus lagu qabto Doha.
DAAWO: Fabio Coentrao oo TUUN DHEERE uga ridaya Cristiano Ronaldo